आमा र छोरीलाई पाठेघर उपहार - बडिमालिका खबर
जचाउन चाहिँ गइनँ। तल शर्मिला दिदीलाई पनि त्यस्तै हुने रहेछ। शनिबार जंगल जाँदा भनिथिन्, ‘उमेर पुगेपछि हामी आइमाईलाई यस्तै हो बड्डी।’
बरू फेरि तिनै शर्मिला दिदीलाई भन्छु भनेर सोचेँ। यस्तो यस्तो भएको भनेर सुनाएको, बूढी त, ‘ओहो! आङ खसेछ स्यानी, चुरा राखे ठीक हुन्छ रे’ पो भन्छिन्।
‘लक्षण अलिअलि देखिँदै थाहा पाए त व्यायाम गरे पनि निको हुन्छ रे नि त!’
‘अँ, खै के-के चरण चरण हुन्छ रे। खासमा अत्ति ढिलो गरेर हो, नत्र यस्तो हुने नै थिएन!’
एकैछिन रोकिएका के थिए, जिउ त तातो हुन थाल्यो। उठ्न खोज्छु, सक्दै सक्दिनँ। तातो झन्झन् बढ्न थाल्यो। आत्था! पोल्यो। म जुरूक्क उठेँ। आँखा खुल्यो, पोल्न हरायो। ओहो! के भयो भर्खर? के देखेँ मैले? आत्तिएर जिउ छामेँ। टिसर्ट पसिनै पसिनाले भिजेछ। सपनाको आगोले पोलेर हो यतिका पसिना निकालेको?
आधा होसमै बाथरूम गएर मुख धोएँ। पछाडि सरेर एकछिन ऐना हेर्दै पेट छुन थालेँ। बाहिरबाट पेट छामेरै पाठेघर भेट्छु जस्तो! बच्चाको रहरै नभएको मेरो शरीरले कल्पना नै नगरेको बच्चा सपनामा गुमायो। सन्तान नचाहेकै भए पनि गुमेपछि चाहिँ माया लाग्ने रहेछ। एकछिन टोलाएर बेसिनमा हात अड्याउँदै सोच्न थालेँ- मेरो त झूटो डरको पसिनाले टिसर्ट मात्रै भिज्यो। देशभरी अहिले यही डरले कति चोली, कुर्ता, ब्लाउज, टिसर्ट अनि गाला निथ्रुक्कै छन् होला?
घर त सबैलाई सुरक्षा दिने न्यानो ठाउँ हो। तर कति घरभित्रका पाठेघर साँच्चै सुरक्षित छन् होला? अब म पूरै ब्यूँझिएँ। आउनुस्, सबै सँगै ब्यूँझिऔं।
नेपालमा हरेक वर्ष लगभग तीन हजार महिलाको शरीरमा जन्मिने पाठेघरको क्यान्सरले तीमध्ये करिब दुई हजार महिलाको ज्यान लिन्छ। नेपालका महिलालाई सबभन्दा बढी सताउने क्यान्सरमै पाठेघरको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा आउँछ। यी रोग पत्ता लागेका आमाहरू मात्र हुन्। जचाउन अप्ठ्यारो लागेर, निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने थाहै नपाएर, बाटो खर्चले तर्सिएर अस्पतालसम्म जान नपाएका अरू थुप्रै आमा छन्। अनि ती आमासँग मेरो छरिएको सपनाजस्तै थुप्रै कहाली लाग्दा भोगाइ छन्, जुन सुन्दा मात्रै पनि आङ सिरिंग गर्छ।
हामीलाई जीवन उपहार दिएको पाठेघरले जब आफूले उपहारमा रोग पाउँछ, तब बदला लिन आमालाई सताउन थाल्छ।यो रोग उपहार हामीले जानीजानी दिने होइन, हाम्रो बेवास्ताले दिने हो। बनिसकेका आमा, बन्न बाँकी आमा अनि आमा बन्नै नचाहे पनि जबर्जस्ती पाठेघर पाउने छोरी, कसैको पाठेघरले रोग उपहार पाओस् भन्ने चाहना कसैको हुँदैन।
तर के नचाहेर मात्रै पुग्छ? यी पाठेघरमा आउने रोग असाध्यै प्रतिस्पर्धी अनि दौडिन खप्पिस हुन्छन्। मौका पर्खेर बसिरहेका। हाम्रो सुरक्षा र हेरचाह कम हुनेबित्तिकै एउटा न एउटा रोग उपहार बनेर कुद्दै पाठेघर पुगिहाल्छ।
त्यसैले नचाहेर मात्रै नपुग्ने रहेछ। साँच्चै पाठेघर बचाउनु छ भने, उपहारको मुखौटा लगाएर पुग्ने रोगभन्दा पहिले हाम्रा आफ्ना उपहार त्यहाँ पुग्नुपर्छ। आउनुस्, सँगै उपहार खोजौं। चाँडै मातातिर्थ औंसी आउँदैछ, आमाको मुख हेर्ने दिन।
हुन त हामी आमालाई देवी भन्दै मन्दिरको मूर्ति जसरी पुज्नेहरू हौं। मूर्ति भनेपछि आमालाई पनि आफू ढुंगाजस्तै लाग्दो हो, आमा दुखेको सबै सहिदिन्छिन्। हाम्रो पालो, ‘सहनशील आमा महान’ भन्दै झन् सहन कर लगाइदिन्छौं।
आमालाई आमा बनाउने ठाउँ हो पाठेघर। यसपालिदेखि हरेक वर्ष आमाको मुख हेर्ने दिनमा बरू आमाको पाठेघरलाई अस्पतालको मुख देखाइदिऊँ न! मिठाइ, कपडा, गहनाको साटो यो उपहार कस्तो होला? यति उपहार पाए आमाको पाठेघरमा रोग कुद्न पाउँदैन। कसैगरी कुदिरहेको रहेछ भने पनि आमालाई सताउन पाउँदैन।
आमाहरू छोरी पनि हुन्। हुन त छोरीको बिहे हुनेबित्तिकै नाति/नातिनीको हतारो लगाइदिने बाआमालाई उसको यौनसम्बन्ध पापजस्तो लाग्न नहुने हो। बिहेअघि कुनै केटा मान्छेलाई ‘चुम्बन पनि नगर्नू है’ भनेकी छोरीले बिहेकै रात कोही केटासँग ‘सुत्न’ जानोस् भन्ने आश लाग्न नहुने हो।
तर हुन नहुने धेरै कुरा हुन्छन्। बाआमालाई छोरीले बिहेअघि यौनसम्बन्ध राख्ने त के, त्यसबारे कुरै नगरिदियोस् जस्तो लाग्छ। आफूले पचाउने कुरा पचाउन सकेनन् भन्दैमा बाआमालाई पापी भन्न पनि सकिँदैन। लौ बाआमा, ठीकै छ, त्यही नै सही। तर बिहेपछि त छोरीको यौनसम्बन्ध हुन्छ। कम्तीमा यति त मान्नुहुन्छ नि है? मान्नुहुन्छ मात्रै किन, चाहनुहुन्छ।
उसो भए अब छोरीको बिहे बजेटबाट १५ हजार रूपैयाँ छुट्याइदिऊँ। बिहेको बजेट नै १५ हजार छ भने सबै खर्च यसैमा लगाइदिऊँ। लगभग १५ हजार पर्ने खोप छ एउटा, ह्युमन प्यामिलोमा भाइरसविरूद्धको खोप।
आफ्नो पाठेघर बोकेर अर्काको नयाँ घर जान लागेकी छोरीलाई योभन्दा सुन्दर उपहार अरू के हुन सक्छ? ती छोरी पछि आमा बन्ने-नबन्ने, उनको रोजाइको कुरा हो। तर छोरी र आमा भएकै कारण उनको ज्यान धरापमा नपरोस्, यति याद गर्नु बाँकी सबैको कर्तव्य हो।
हुन त पहिलो कर्तव्य राज्यको हो। तर राज्यले हतार गरेन भन्दैमा कुनै छोरीको ज्यानको मूल्य त घट्दैन। अब अन्तिम र सबभन्दा उत्तम उपहार। यो उपहार हामी आफूले आफैंलाई।
आज हामी कति धेरै यस्ता छोरी छौं जोसँग आफ्ना निर्णय अनि हक, दुवैको चाबी आफैंसँग छ। चाहेको दुनियाँ देख्न, मन लागेको गर्न चेत छ अनि हातमा आफैंले कमाएको पैसा पनि। त्यही कमाइबाट सपनाको घर बनाउन बैंकमा बचत समेत भइरहेको होला। तर घरमा त भोलि बस्ने हो। भोलि बाँच्ने हो। उसो भए आफूसँग आज बाँचिरहेको पाठेघरलाई बचाउन आजै खर्च किन नगर्ने? खर्च पनि होइन, आफूमाथि लगानी किन नगर्ने? आखिर आफूलाई भोलि दुःख पर्दा अरूले दुःख देखिदिने मात्रै हुन्। सहिदिने त होइनन्।